Uchwepheshe We-Semalt Utshela Kungani Ukuqala Ibhizinisi Lase-Inthanethi Kukhulu Kunokuba Ucabange
Kuwo wonke umuntu ofuna ukuqala ibhizinisi,uhlelo luyisinyathelo sokuqala ekuqaliseni umsebenzi wakho. Abantu abaningi nje bagxuma ekuqaliseni inkampani ngaphandlebecabanga ngempela ngezinto, ngoba bazizwa bekhathele ukusebenza kwabanye. Noma kunjalo, kudinga ezinyeisikhathi kanye nokuyinkimbinkimbi kwezenzo eziqhubekayo. Ngenhlanhla, kunamathuba amaningi kubantu abanesithakazeloekuqale ibhizinisi labo ku-intanethi - equipment monitor reader. Isazi esiholela phambili Semalt Amasevisi Wezinhlelo Zedivayisi, uMichael Brown uchaza ukuthi yiniizinyathelo ekuqaleni ibhizinisi lakho ku-inthanethi zibaluleke kakhulu.
Uma uthengisa umkhiqizo, qinisekisa njaloikhwalithi ifanelana nesimo sakho sebhizinisi. Eqinisweni, amakhasimende namuhla azimisele ukukhokha ngaphezulu imikhiqizo ayethembayo,ikakhulukazi uma bezithenga ebhizinisini elincane. Kunezibonelo eziningi zamamama ezenza izingubo zaboisikhathi sokuphumula bese uthola impilo yakho kahle. Uma ufuna ukwakha ibhizinisi elikhulu, qinisekisa imikhiqizo yakhophuma kuzo zonke. Umncintiswano wezansi awujabulisi, ikakhulukazi ngawo wonke umncintiswano ovela phesheyaizinkampani. Ngokuhamba kwesikhathi, uzothola impumelelo enkulu ngebhizinisi lakho le-inthanethi uma unamaphuzu okuhlukanisa.
Lungele ukutshala izimali
Uma udinga inzuzo ukuze uqale inkampani yakho, qiniseka ukuthi ikhonaimali ongakwazi ukuyilahleka. Abantu abaningi namuhla bakhathazeka ngokuthatha ingozi enkulu futhi belahlekelwa yiboukutshalwa kwezimali kokuqala ebhizinisini. Nakuba lokhu kungase kube ukwesaba okunengqondo, ukuze uphumelele ebhizinisini, kufaneleqaphela ukuthatha ingozi. Kunabantu abaningi namuhla abaye bangena engozini, futhi sekuye kwaba nempumelelo enkulu kunaboungacabanga. Kungakhathaliseki ukuthi iphupho lakho liyini, udinga ukuba necebo endaweni ukuze uyifeze. Ngaphandle kohlelo, wenabazobe banamali amaningi atshalwa imali ebhizinisini futhi akukho lutho oluzobuya.
Thola Ozakwethu Othembekile
Izinguquko eziza ngokuthuthukiswa kobuchwephesheunike amandla abanikazi bamabhizinisi abasha ngaphezulu. Kwenza ukuqala ibhizinisi ku-inthanethi kube lula kunanini ngaphambili. Ngenkimbinkimbi ezinjaloabahlinzeka ngezinsizakalo njenge Semalt ,Ukumaketha ibhizinisi lakho ku-intanethi kuba yingxenye yomsebenzi wezobuchwepheshe okhishwe kalula. NiniAbasunguli bangagxila ezindabeni ezibaluleke kakhulu ezifana nokukhiqizwa, ukusatshalaliswa, kanye nokusebenza, umlingani othembekilekuzokwenza iwebhusayithi yakho ibe yindawo yokuthengisa. Futhi, indlela enjalo izokuvumela ukuba ugcine isikhathi nemali ngokuqasha iqembuochwepheshe bephrojekthi yakho futhi ubenze baqoqe ndawonye. Okufanele ukwenze ukuthuthukisa inani eliyingqayizivele lakhoumkhiqizo noma isevisi, setha isabelomali futhi ulungele ukukhipha ibhizinisi lakho emhlabathini ngosizo lochwepheshe lomeluleki wedijithali.